यी अभिनेत्रीलाई मन्चमा लाज छोप्न धौधौ, यस्तो बिजोक अवस्थाको फोटो सार्बजनिक (फोटो सहित) - nayakhoj24.com
प्रकाशित मिती: March 22, 2018 | nayakhoj24 admin पढ्न:0मिनेट
ग्ल्यामर वल्र्डमा अनेक चर्चा–परिचर्चा हुनेगर्छ । धेरैजसो चर्चा सेलिब्रेटीको लभ लाइफ, सेक्स स्क्यान्डल आदि बिषमा हुनेगर्छ । कहिले उनीहरुको विवादस्पद बयानले हंगामा मच्याउँछ । कहिले लाजलाग्दो पहिरनले उत्पात मच्याउँछ । सेलिब्रेटी पनि यस्तो चर्चाकै गोलचक्करमा रहन रुचाउँछन् ।
ठूला इभेन्टहरुमा अभिनेत्रीहरु यस्तो गेटअपमा देखिने गर्छन् कि सबैको ध्यान उनीहरुतर्फ खिचिने गर्छ । हुन त उनीहरुले अरुको ध्यान खिच्नकै लागि विचित्रको गेटअप गर्ने गर्छन् ।
अहिले इन्टरनेटमा त्यस्तै अभिनेत्रीको तस्वीर भाइरल भएको छ । अभिनेत्री एरियल विन्टर रिवीलिंग ड्रेसमा एक अवार्ड समारोहमा पुगेकी थिइन् । अवार्ड एक बर्षअघि सम्पन्न भएको हो । तर तस्वीर चाहि अहिले भाइरल भएको छ
अवार्ड समारोहमा उनले लाजमर्दो अवस्था व्यहोर्नुप-यो । त्यसबेला चारैतिर उनलाई क्यामेराले घेरेको थियो । एरियल विन्टर एमि अवार्डमा भाग लिदै गर्दाको तस्वीर अहिले भाइरल भएको हो । त्यसबेवला उनले अगाडि खुलेको पहिरन लगाएकी थिइन् ।
‘कृ’ नायिका अदितीका बोल्ड तस्बिरहरु-
मिस नेपालको २३ औं संस्करण आज, कसले पहिरिएला ताज !
भाइरल बन्दै साउथ फिल्मकी यी सुपरहिट अभिनेत्री
नायिका श्वेता खड्का विवाह बन्धनमा बाँधिने तयारीमा !
सरुको गित नोमिलेशनमा पर्न सफल आफुलाई जिताऊन आम नेपालीलाई आग्रह !
पुरा हुने भयो आलिया भट्टको धोको, यी अभिनेतासँग गर्दैछिन् काम